» रोनाल्डोले छोड्नुपर्‍यो प्रेमिका
रोनाल्डोले छोड्नुपर्‍यो प्रेमिका
थाहा छ ? लकडाउन भएपनि रोनाल्डोको ससुराली आउजाउ रोकिएको थिएन् । सौराहा क्षेत्रमा मनमौजी घुम्नु, ज्वाईको मेजमानी पाउनु र फर्कनु रोनाल्डोको दैनीकी नै हो । रोनाल्डो भनेको चिन्नुभो ? उही क्या त । हेत्तेरी विश्व फुटवलर पोर्चुगिस क्रिष्टिनो रोनाल्डो या भुतपूर्व व्राजलीयन खेलाडी रोनाल्डो भनेको होईन । सौराहा ससुराली बनाउने अनि हाम्रो निकुञ्जमा वस्ने हात्ती रोनाल्डो पो त ।
हो, हात्ती रोनाल्डो । आउनुस् आज म रोनाल्डोको ससुरालीको कथा सुनाउँछु । रोनाल्डो त खासमा जंगली हात्ती हो । सौराहा क्षेत्र वरपरका सौराहा हात्तीसार र खोरसोरमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्र रोनाल्डोको ससुराली हो । किनभने हात्तीसारका सवै पोथी हात्तीहरु रोनाल्डोको प्रेमिकाहरु हुन् । रोनाल्डोलाइ आफु खुसी प्रेमिका बनाउन यहाँ कसैले छेक्न सक्दैन् । मान्छेको कुरा गरेको हैन । अरु भाले हात्ती कसैले पनि उसको रजाइमा धावा बोल्न सक्दैनन् । यो ठाउँमा रोनाल्डो पूर्णरुपमा स्वतन्त्र छ ।
सौराहा अनि बद्रहनी टोलका वासिन्दाहरु आफ्नो ज्यानको वाजी लगाएर पनि रोनाल्डोलाई ज्वाइँ मान्छन् । धेरै विध्वंस मच्याउने गरि बेला बेलामा बस्तीमा आतंक पनि मच्याउछ । तर सौराहा क्षेत्र लगायत बद्रहनी टोलका बासिन्दा रोनाल्डोलाई ज्वाइँ नै मान्छन् । उनीहरुलाई यसको आक्रमणको भय त छ नै तर पनि ज्वाइँ मान्छन् । यो ठाउँमा २०५२ साल देखि जंगली हात्तीको प्रवेश सुरु भएको हो । यहाँ आउने हात्तीहरुलाई हात्तीसारका कर्मचारीले न्वारन गरिदिन्छन् । रोनाल्डोको नाम पनि हात्तीसारकै कर्मचारीले राखेका हुन् । रोनाल्डो आउनुभन्दा पहिले यो क्षेत्र रोमियोको ससुराली थियो । रोमियोको मृत्यु पछि यो ठाउँ पूर्णरुपले रोनाल्डोको ससुराली हुन आयो । अनि त्यस पछि निरन्तर रोनाल्डो यहाँ आउन थाल्यो । उसले यतै प्रेमिकाहरु बनायो । अनि उनीहरुलाई भेट्न पटक पटक आउन थाल्यो ।
हुन त हात्तीसारका पोथीहात्तीहरुलाई अरुले पनि प्रेमिका बनाउन भरमग्दुर प्रयास नगरेका कहाँ हुन् र ? तपाईंहरुलाई ध्रुवेको बारेमा त थाहा छ नि । हो त्यही ध्रुवेले पनि रोनाल्डोको ससुराली कब्जा गर्न अनेक प्रयत्न गर्‍यो । अर्को गोविन्देले पनि । तर सकेनन् । रोनाल्डो नआएको दिन कहिलेकाहीँ उनीहरु देखिन्छन् । तर यहाँका बासिन्दाले रोनाल्डोलाई पो ज्वाइँ मान्छन् । अरुलाई किन मान्थे ?
केही दिन अघिमात्र यहाँ नयाँ हात्ती देखा परेको थियो तर नामको न्वारन भने कर्मचारीहरुले गर्न पाएनन् । यसलाइ रोनाल्डोले खेदेर सुनाचुरी कटाइदियो । रोनाल्डोले आफ्ना प्रेमिकाहरुसँग अरुकुनै जंगली हात्तीलाइ ढिम्किन पनि दिँदैन । सौराहा यतिबेला सुनसान छ । अनि रोनाल्डोको प्रेम झाँङ्गीदै छ । पर्यटकहरु भरिभराउ हुँदा उसको प्रेमालापमा बाधा हुन्थ्यो । उ पर्यटकलाई धम्काएर रिस पोख्थ्यो । यतीबेला उसलाइ कसैको लाज डर छैन् । उ निर्धक्क प्रेमिकासँगको प्रेमालापमा छ ।
हरेक बर्षको २ देखि ३ महिना मनसुनको समयमा रोनाल्डो प्रेमिकाहरुलाई छोडेर जंगलमा जाने हराउने गर्छ । हिउँद लागेसँगै उ फर्किन्छ । त्यतीबेला उसले थप नयाँ प्रेमिका पनि पाउँछ ।
यसबर्ष अघिल्ला बर्षजस्तो अली भएन केहि दिनअघि मात्र रोनाल्डोको ससुरालीमा ध्रुवे छिर्‍यो । जम्मा चार, पाँच दिन भएको थियो ध्रुबे आएको । केहि दिन पछि रोनाल्डोको पनि आगमन भयो । त्यस पछि धुर्बे र रोनाल्डोको युद्ध सुरु भयो हात्ती प्रजनन केन्द्रमा । ध्रुवे र रोनाल्डो हात्तिको भयानक युद्द भयो । सधैँ जित्थ्यो रोनाल्डोले यसपटक के भो कुन्नी रोनाल्डो अन्तिममा हार्‍यो र ससुराली ध्रुवेलाई छोडेर रोनाल्डो वनवास लागेको छ । सायद उ फेरी बलियो भइ फर्केर आफ्नो नीजि ससुराली फिर्ता गराउने सोचेर फर्किएको छ । उसो त यहाँका बासिन्दाले पनि ध्रुवेभन्दा रोनाल्डो नै ज्वाइँ भइराखोस् भन्ने चाहन्छन् । रोनाल्डोले आफ्नो ससुराली फेरी पाउला त ?